Eli nqaku liMncedisi weendwendwe: eilu
Kukho iintlobo ezahlukahlukeneyo ze-nibs ze- pen pens . Ndisebenzisa i-Speedball ne-Hunt ipenki, kodwa kukho ezinye iimpawu. Kukho ezininzi iintlobo ezahlukeneyo ze-nibs. Ezi ndizithethayo zenzeke nje ukuba ziyimizekelo engayisebenzisa rhoqo. Unokufumana ezinye i-nibs ezifanele ngakumbi kwisitayela sakho kunye nokukhethwa kwakho.
- Hunt 100 ("Umculi"): i-nib elula kakhulu kwaye iguquguqukayo.
Imizila yayo ingaba likhumbule ngokugqithiseleyo.
- Hunt 102 ("I-Crow Quill"): isenzo esinzima, esinjengepensele. Kulungile ukukhawuleza ngokukhawuleza, ukuchithwa , njl.
- I-calligraphy nibs: ezi zixhobo ezakhelwe ngaphakathi, ngokuqhelekileyo zenziwe ngebhedu. Bamba inki engaphezulu kwaye banike umgca wokuhlala. Ngoxa zijoliswe kwi-calligraphy, zingasetyenziselwa ukudweba. Iibhola ezahlukeneyo zibonelela ngeendawo ezahlukeneyo kunye nobubanzi bomda. I-Speedball nibs ifika kwisikwere, ijikeleze, iiplati ezicwangcisiweyo kunye neendawo. I-nibs eyahlukeneyo iya kufuna abaphathi abahlukeneyo.
- Hlanza i-nibs yakho emva kwayo yonke into ukukhusela ukugquma nokugqwala. Indlela efanelekileyo yokuhlambulula i-nibs kukuba "igwebe" kwindawo yokuhlamba i-dishwashing and then give them a scrub nge-brashi ebushushu. (le nto ayisebenzi kwi- calligraphy nibs, njengoko inkunkuma iya kufumana indlela- enye indlela yayiza kukulayisha ibrashi yokupenda nge-dishwashing paste kwaye uyisebenzise ukutshiza i-nib)
- Ukuthintela ukugqithisa, kancinci usule i-nibs ngesambatho esingenasiphelo kwaye uvumele ukuba bawume ngomoya ngaphambi kokugcina.
- Inkqubo yokugcina kakuhle ye-nibs yiplastiki "ibhokisi yebhokisi" apho iibs ezahlukeneyo zingagcinwa ngokwahlukileyo.
- Ukuba i-nib ngokukhawuleza ibonakalisa utshintsho kwi-inki yokuhamba (isib. Ukuyeka ukuhamba nokuqala, iiblothi, njl.), Inkenki eyomileyo okanye iifayili ukusuka kwiphepha li no kubangela ingxaki. Ukucoca ngokucokisekileyo kuza kuxazulula ingxaki.
Ukuba ukucoca akunakunceda, hlola i-nib phantsi kweglasi ephakamileyo- 'izityela' ziye zatshintshiweyo, okanye ziyahlukana. Unokuzama ukugoba ngepeni ipenki ngokubumba kunye neebini zeepelisi, kodwa ngokuqhelekileyo ukulungela ukuphuma kunye nokuthenga entsha. Ukuba ukugqithwa yingxaki ke i-nib iya kufuneka ilahlwe kwakhona.
Iingcebiso eziPhezulu kunye neNkcazo
- Ngokungafani neIndiya Ink , ii-inks ezisekelwe kumanzi (ipenjeni yamanzi) zilula ukuhlambulula i-nibs-zifuna nje ukuba zihlambuluke ngokukhawuleza phantsi kwamanzi. Oku kunokuba kukuhle xa ukhawuleza okanye ufuna nje ukwenza amagosa ambalwa, imidwebo, njl. Zingasetyenziselwa ukwakha ipen-nokuhlamba ngokuhamba ngomsebenzi onenkcukacha ngokucocekileyo, kumanzi .
- Sebenzisa iphepha elibusayo, elingenanto. Iphepha elibi lingalimaza i-nibs, kubangele ukuba 'babambe' phezu komhlaba (uya kugqitywa kunye neibhentshi zeenki kunye ne-splatters xa kwenzeka.) I-Lint ingabanjwa phakathi kweetini.
- Xa udweba, i-nib kufuneka ithathelwe ngaphaya komhlaba wephepha-ukuxhoma i-nib kuyobangela ukuba igqibe okanye ibambe phezulu. Oku kuya kuwonakalisa zombini ipeni kunye nephepha kwaye kubangele inkino yokutshiza kunye nokucima.
- I-gum ne-vinyl erasers zilungele ukususa imigca yeepencil kwi-inked work.
Iintlobo zobuciko, ngokukodwa, aziyi kubonakalisa imigca yeenkin. Iinqwelo ezinzima kunye ne "inkinobho zeengki" azikhuthazwa- zivame ukulimaza umgangatho wephepha kwaye zenze kube lula.
- Inki ye-White ilungile ukumboza iimpazamo ezenziwe kwiinki ezimnyama, okanye kwiindawo ezikhanyayo, ukuphucula ukuphuculwa, njl.
Okokugqibela: Musa ukoyika ukuzama. Ama-Nib alula ukuwasebenzisa kwaye asebenziseke kakhulu. Ukuphazamisa uxinzelelo, bamba ipeni njl.
Qaphela: kulabo bafuna iincwadi ezilungileyo kwimixholo, Ukunikezela kwiPen na Ink, ngo-Arthur L. Guptill kunye nePen & Ink Ink Book, nguJoseph Smith.
Indlela yokusebenzisa iJacklines
Ukubuyisela Ukuguqula Umsebenzi